/ 1,26 nwere ike ghara ihichapụ Error
Ì chere ihu atụmanya nke adịkwa gị faịlụ ma si na mpụga mbanye ma ọ bụ ike mbanye? Ọ bụrụ na ị na-enwe na crazy oge ebe i furu efu ụfọdụ pụrụ iche faịlụ site n'ikike nke ụfọdụ ndudue, virus, na n'ibu nsogbu na-ọ bụla ọzọ ụzọ mgbe ahụ ị na-adịghị mkpa na-atụ uche a obinku kpumkpum ekele abụọ dị ike data mgbake ngwaọrụ. Isiokwu a ga na-agbalị ìhè ngwá ọrụ abụọ ebe na-enye gị a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ nnyocha nke otú i nwere ike naghachi gị ehichapụ faịlụ.
EaseUs ehichapụ faịlụ mgbake
EaseUs bụ software e mere iji napụta ndị kasị mma mgbake ọrụ maka ọrụ na a dịgasị iche iche nke nyiwe. The software bụ ịkwa akwa mere ka ọ bụla naghachi faịlụ ụdị na fọrọ nke nta ọ bụla na ngwaọrụ sitere na site PC, Memory kaadị, Flash draịva, smartphones, Mac kọmputa wdg The software dị mfe iji nyere na o nwere onye ọrụ-enyi na enyi interface na na kwadoro site na ọkachamara aghụghọ iji na-enyere onye ọrụ na-agbake data.
Ọ 's mfe iji.
Ọ naputa ụdị ọ bụla nke na-ehichapụ data.
Ọ na-akwado mgbake ọ bụla nchekwa ngwaọrụ.
Ọ na-akwado ma Mac na Windows nyiwe
Ọ bụ free version dị nta.
Ọ bụ a bit ọnụ.
Wondershare Data Recovery Ngwá Ọrụ
The ọzọ nhọrọ i nwere ike iji na-agbake ehichapụ faịlụ bụ Wondershare Data Recovery software ngwá ọrụ. A bụ ihe ọzọ ngwá ọrụ na-boosts oké atụmatụ na n'ógbè nke ọrụ na ọrụ ahụmahụ. Na okwu nke usability, ọ bụ a nnọọ vasatail ngwá ọrụ na-ike naghachi mebere ụdị faịlụ ị na-achọ na-agbake. Nke a bụ iji na-egosi na i nwere ike naghachi akwụkwọ, videos, audios faịlụ, ozi faịlụ, abịakọrọ faịlụ, na photos n'etiti ndị ọzọ. The software ga-ịrụ nke ọma na-agbake faịlụ site ọ bụla nchekwa na ngwaọrụ-ma ọ ebe nchekwa kaadị, flash draịva, camcorders, mbughari draịva ma ọ bụ ọbụna ike draịva. A tụnyere nke ndị a ngwá ọrụ abụọ na-ọma gosiri na table n'okpuru:
Panèl faịlụ, videos faịlụ, audios faịlụ, ozi faịlụ, Archive faịlụ, Photo faịlụ
Fast kamakwa na-adabere na ego nke data na-natara
Ebe nchekwa kaadị, Flash draịva, Camcorders, mbughari draịva, Ike draịva
Ngwa ngwa na nnọọ pụrụ ịdabere
Ebe nchekwa kaadị, Flash draịva, Camcorders, mbughari draịva, Mac ji ede, desktop, Mac nkesa,
Data Recovery Ọkachamara Professional 9.0 (Win): $69.95 Data Recovery Ọkachamara Pro na Bootable Media (merie): $99.90 Data Recovery Ọkachamara ẹkesikpede 9.0 (Win): $499.00 Data Recovery Ọkachamara maka Mac 9.1 (Mac): $89.95 MobiSaver (Iphone): $59.95 MobiSaver maka Mac: $79.95 MobiSaver maka Android: $39.95
Olee otú Naghachi Data Iji Wondershare Ngwá Ọrụ
Agbake gị furu efu data iji Wondershare Data Recovery Ngwá Ọrụ bụ mara mma nke ukwuu mfe dị ka ihe niile ị chọrọ ime na-eso ole na ole dị mfe nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1: Wụnye Ngwá Ọrụ na ẹkedori ya
Ị ga-mkpa ibudata na wụnye Wondershare mgbake software na kọmputa gị ma ọ bụ na laptọọpụ na ẹkedori software. Ị nwere ike ibudata ya na: http://www.wondershare.com/data-recovery/
Ị ga-enwe iji họrọ version nke kọmputa na-akwado nyiwe akwado bụ Mac na Windows. Ị na-ekwe ka ibudata ma wụnye a free version ma gị functionalities ga-abụ nanị. Iji nweta arụmọrụ zuru oke, ị ga-mkpa ime a zuru zuo nke otu. Biko mara na ị na-ekwesịghị wụnye software na a na ebe nchekwa na ọnọdụ na-ịchọrọ ị naghachi faịlụ site na.
Nzọụkwụ 2: Họrọ nhọrọ na-ịchọrọ ị na-agbake
Ozugbo ị malite gị ngwa, ị ga-anọ nhọrọ ịhọrọ site na onye ọrụ interface:
• Echefuola File Iweghachite
• Raw Iweghachite
• nkebi Iweghachite
• malitegharịa Iweghachite
Ọ bụrụ na ị họrọ Echefuola File Iweghachite si nhọrọ, ị ga-kpaliri ịgafe ego mbanye na ị chọrọ naghachi furu efu faịlụ site na. Mgbe ịlele, na-akwadokwa mbanye, Pịa na Tulee igbe Kwado Deep iṅomi. Pịa na iṅomi.
Chere maka scanning usoro rụchaa mgbe ahụ ịhụchalụ faịlụ na naghachi bụla ị chọrọ wee pịa Naghachi.
Ọ bụrụ na nhọrọ ada ada, ị ga-aga na-agbalị ọzọ oge a na-eji Raw Iweghachite. Ozugbo i họrọ nhọrọ ị ga-enwe na-ahọrọ mbanye ị ga-achọ naghachi na pịa Naghachi.
Họrọ iṅomi maka ehichapụ faịlụ wee pịa na iṅomi.
The abụọ nhọrọ n'elu ga-arụ ọrụ nke ọma na-agbake faịlụ site ehichapụ nchekwa ngwaọrụ. Na ikpe na ị chọrọ naghachi partitions na ẹdude faịlụ gị draịva, ị nwere iji họrọ nkebi Iweghachite. Mgbe na-ahọpụta a nhọrọ, ị ga-mkpa ịhọrọ disk ebe ị furu efu ị faịlụ ma họrọ on Quick iṅomi ma ọ bụ Complete Search wee pịa na iṅomi. Ihuchalu natara faịlụ mgbe ahụ kụrụ na Naghachi.
Ọ bụrụ na ị nwetara a nsogbu n'oge mgbake usoro ị nwere ike mgbe niile na-agbalị resuming si ebe ị hapụrụ iji malitegharịa Iweghachite.
Ugbu a na ị maara nke ngwaọrụ ịhọrọ site na mgbe ọ bụla ị nwere data nsogbu. Otú ọ dị, ị kwesịrị ị na-agbalị mgbe nile akwado ị data iji hụ na ị belata ihe ize ndụ nke adịkwa mwute faịlụ
> Resource> Alternatives> Easeus ehichapụ faịlụ mgbake na ọ bụ ihe kacha mma ọzọ